Sida loo dejiyo hubinta higaada ee iOS | Wararka IPhone
Pablo Aparicio | | dhowr
El Hubi hubinta Qalabka mobiilku si toos ah uma hagaajiyo waa mid ka mid ah waxyaabaha aan jecel nahay oo aan neceb nahay isla qiyaas ahaan. Waan jecel nahay maxaa yeelay waxay noo ogolaaneysaa inaan si dhakhso leh wax u qoro iyo, markii aan la qabsano shaashadda moobilkeena, si ficil ah iyadoo aan la eegin shaashadda. Waan necbahay isaga maxaa yeelay mararka qaarkood wuxuu leeyahay nolol isaga u gaar ah wuxuuna qoraa ereyada isaga ula muuqda oo aan ahayn kuwa aan dooneyno. In kasta oo ay tahay goob aasaasi ah, waxaa jira isticmaaleyaal badan oo shaki ka qaba sida loo maareeyo aaladdan wax qorista.
Dhibaatada ka taagan khaladka toosan ayaa ah inuu isku dayo inuu isticmaalo luqad aad u sax ah. Intaas waxaa sii dheer, iPhone-ka, inuu yahay shey wanaagsan oo Apple ah inuu yahay, ma jecla erayada xun, sidaa darteed waa inaan si taxaddar leh ugu qornaa haddii aynaan rabin inay wax u dirto macno gebi ahaanba ka duwan. Dhinaca kale, waa macquul in ay jirto ereyo kala duwan oo isku mid ah la yiraahdo isla luuqada ah, sida kiiska "waxyar" loo isticmaalo Albacete in lagu yiraahdo "waxyar". Xaaladahaas oo kale, waxay noqon kartaa fikrad wanaagsan in la joojiyo saxeexa, nidaam aad u fudud oo aan hoos ku sharaxeyno.
1 Sida loo demiyo hubiyaha higgaadinta iPhone-ka
2 Sida loo beddelo luqadda hubiyaha higaadda
3 Sida luqad loogu daro
4 Sida loo hawlgeliyo hubiyaha higaadda reer Catalan
5 Waa maxay "Higaada Hubi"?
Sida loo demiyo hubiyaha higgaadinta iPhone-ka
Sidaan kor ku xusay, gab autocorrect Waa wax aad u fudud. Laakiin, sida had iyo jeer, waa inaad tixgelisaa raadinta dejinta ama inaad ogaato jidka. Waxaan ka fureynaa ficilladan:
Waxaan fureynaa Dejinta.
Marka xigta waxaan aadeynaa General.
Waxaan hoos u gaabinaa oo aan galnaa Keyboard.
Ugu dambeyntiina, waa inaan barkinta, lever ama isbeddel ee Autocorrector.
Sida loo beddelo luqadda hubiyaha higaadda
Beddel luqadda akhristaha Higaadda ayaa ah mid aad u fudud, laakiin waxaa habboon in marka hore la eego barta xigta. Sikastaba xaalku ha ahaadee, si aan u badalno luuqada waxaan haysanaa laba ikhtiyaar:
Waxaan taabaneynaa kubbadda adduunka luqadduna midba mid bay uga beddelan doontaa (tusaale, Isbaanish, Ingiriis, Isbaanish…).
Waxaan taabaneynaa oo aan qabaneynaa kubbadda adduunka si aan u aragno dhammaan luqadaha aan wada shaqeynay oo leh ikhtiyaarka ah in la joojiyo qaamuuska saadaasha.
Sida luqad loogu daro
Si loo bedelo luqadda sida aan ku sharaxnay qodobka hore, marka hore waa inaan bedelnaa ku dar luqado cusub kumbuyuutarka. Tani waxay u shaqeysaa sida soo socota: waxaan ka bilaabeynaa qormooyinka aan dooneyno in iPhone-keena, iPod Touch ama iPad-ka ay awoodaan inay saxaan waxa aan ku qoreyno Isbaanishka, laakiin taasi, sabab kastoo jirta, waxaan sidoo kale dooneynaa inay ku sameyso Ingiriisiga Mareykanka Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan sameyno kiiskan ayaa ah inaan kudarto kiiboodhkaas. Si looga fogaado jahwareerka, waxaan faahfaahin doonaa talaabooyinka la raaco:
Sida markii la joojinayo AutoCorrect, waxaan fureynaa Settings.
Marka xigta, waxaan aadeynaa General.
Waxa ku xigaa waa inaad gashid Keyboard. Haddii aadan waligaa taaban, agtiisa waxaad ku arki doontaa 2, mid waa kiiboodhka luqaddaada iyo tan labaad oo ah tan Emoji.
Marka xigta waa inaanu taabanaa Add kumbuyuutar cusub. Waan arki doonaa in waxa aan haysanno oo dhan naloo muujiyey.
Waxa xiga ee ah inaynu qabanno, si macquul ah, waxaynu u dooranaynaa luqadda aan doonayno inaan ku darno, taas oo xaaladdan ay tahay "Ingiriis". Haddii uu jiro mid ka socda Boqortooyada Ingiriiska, midka aan waxba dhigayn waa Ingiriisiga meesha Apple deggan yahay, taas oo ah Mareykanka.
Hadda oo aan haysanno luqadda ayaa lagu daray, horay ayaan u haysan lahayn, laakiin sidee loo adeegsadaa? Hagaag, waa inaan tagnaa codsi kasta oo aan wax ku qori karno.
Ugu dambeyntiina, waa inaan doorannaa luqadda annaga oo taabaneyna kubbadda adduunka ee ka soo muuqan doonta wejiga wejiga aan ku marinno Emoji-ga.
Sida loo hawlgeliyo hubiyaha higaadda reer Catalan
Tani waa weydiin aad adiguba na weydiisay. Ma jirto waddo gaar ah dhaqaaji saxeexa higaadda reer Catalan, maadaama aan ka hadlayno luqad rasmi ah oo ka mid ah Jasiiradda Iberian, sidaa darteed waxaa loo sameeyaa si la mid ah inaan ku qaban lahayn luqad kasta oo kale oo ka mid ah kuwa badan ee aan haysanno. Laakiin maadaama su'aashu tahay luqad gaar ah, haddii aynaan si toos ah u shaqeynin si aysan u saxin ereyada Catalan, waa inaan mideynaa wax kasta oo lagu sharraxay qodobbadii hore:
Haddii aynaan u hawlgelin, si macquul ah, waa inaannu kicinnaa khaladaadka sida aan hore u sharraxnay.
Waxaan qabanaa wixii aan ku sharaxay qodobkii hore, laakiin kaliya waxaan badalnaa talaabada doorashada luqada, waqtigaas, si macquul ah, waxaan u raadin doonnaa "Catalan" oo aan ku darnaa.
Ugu dambeyntiina, waxaan ku ciyaari doonnaa kubbadda adduunka oo aan dooran doonnaa «Catalan». Haddii aan taabanno kubbadda adduunka annaga oo aan haynin, way isbeddeli doontaa luqadaha dhexdooda waxaanan ogaan doonnaa inay gaadhay Catalan markii «Catalan» ka muuqato baarka bannaan (wax meesha ka baxaya dhawr ilbidhiqsi ka dib markuu muuqdo).
Waa maxay "Higaada Hubi"?
Sida caadiga ah, dhammaan qalabka macruufka waxay leeyihiin labadaba AutoCorrect iyo AutoCorrect karti. higaada higaada. Sidan oo kale, markaan qori doonno eray khaldan, haddii uu ka helo mid ka mid ah qaamuuskiisa oo iswaafajin kara, si toos ah ayuu annaga noogu beddelayaa. Laakiin haddii, tusaale ahaan, aan dooneyno inaan erey khaldan u dhigno ula kac, waxaan ku sameyn karnaa adigoo riixaya "x" ee u muuqda erayga la soo jeediyey, kaas oo noo oggolaanaya inaan ka tagno ereyga aan qornay. Tusaale ahaan, haddii aan dhigno ereyga "vurro" (waan ka xumahay kuwaaga hadda dhiigga ka ooyaya) oo aan garaacno "x", waxay ka muuqan doontaa sanduuqa wax lagu qoro oo ay ku taal xariiq guduudan.
Fursadaha waa lakala saaraa hadii aan rabno inaan helno sida caadiga ah kumbuyuutarada. Kumbuyuutarrada meesha aan ku qori karno kumbuyuutar ka weyn iyo raaxo badan, waxaan u maleynayaa inay ugu fiican tahay in la hubiyo qoritaanka waxa aan qoreyno iyo annaga ka dig khaladaadka suuragalka ah, laakiin ereyada ha noo badalin. Xaqiiqdii, waxaan ku tijaabinayay Mac muddo dheer ka hor oo waxaan garaacay "Drop Simulator" laba jeer markii aan rabay inaan qoro "Simulatorka Ri". Inkasta oo ay ku hawlgalaan si ku talagal ah, xulashooyinku way kala duwan yihiin si aan u go'aansan karno nooca caawimaadda aan doorbidno.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Sida loo dejiyo higaadaha sixirka ee iOS
Waxa aan rabaa waa in higaad hure-yaashu WALIGAN HA I WEYDIN. Miyuu jiraa qof garanaya sida aan u aammusayo?
Jawaab Elena Ferreira
Aad ayey iigu dhib badan tahay inaan cod dheer ku codsado (gaar ahaan haddii qofku isku dayo inuu ku qoro xafiis aamusnaan aggg), sidaa darteed waa inaan doortaa inaan: taleefan (weli si ka sii raaxo badan). Waxaan raadinayay cashar ku saabsan websaydhka si aan muddo uga caawiyo mowduucan, laakiin ma heli karo :(.
Waxaan ku rakibay wuasar kumbuyuutarkeyga ama pc-ga, waxaan rabaa inaan ogaado sida loo rakibo:
Sideen ugu gudbin karaa feylka 'wuasar' saaxiib cusub ama saaxiibo dhowr ah, anigoon ku haysan koox
Ma heli karo dariiq macquul ah oo aan ku galo oo aan ku saxo ereyada hubiyaha.
Kaliya waa suurtagal in la dhigo / laga saaro.
Oo kansarka baaji.
Laakiin ma arki karo si kasta oo aan si adag ugu soo jeedinayo waxyaabo aan micno lahayn
Sida ereyada Libertad iyo La Paz had iyo jeer magacyada saxda ah